ရန်ကုန်လွှတ်တော်အမြန်ခေါ်ယူပေးရေး တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမယ်၊ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစ္စရေးအစိုးရကမြန်မာကို ရှုံ့ချကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြောအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ - ข่าวสด
ရန်ကုန်လွှတ်တော်အမြန်ခေါ်ယူပေးရေး တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမယ်၊ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစ္စရေးအစိုးရကမြန်မာကို ရှုံ့ချကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြောအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
2 ธ.ค. 2562 - 10:38 น.
၁)ရန်ကုန်လွှတ်တော်အမြန်ခေါ်ယူပေးရေး တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမယ်
ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ခေါ်ယူကျင်းပသွားဖို့ ထုတ်ပြန်ထားပေမယ့် ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ အမြန်ဆုံးခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ဖို့ တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တောင်းဆိုဖို့ လုပ်ဆောင် နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘ ‘ အဓိက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီရင်ခံစာကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက တင်ထားတာလည်းကြာပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေမှာလည်း ဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ မှာလည်း လွှတ်တော်က ထောက်ပြတာတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့က ဘာတစ်ခုမှ တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိဘူး။ ဒီတော့ ရှေ့ကပြောထား တဲ့စီမံကိန်းဆွေးနွေးချက်တွေကို ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ မှာဘယ်လိုတွေ ဆောင်ရွက်ထား လဲဆိုတာလည်း သိချင်တယ်။ လိုအပ်တာတွေကို လွှတ်တော်က အချိန်မီထောက်ပြ နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်”လို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ယခင်က စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကြည့်ရှုဝေဖန်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီရင်ခံစာကစပြီး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အမတ်တွေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့် မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာကို ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီက လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ် လာမှသာ တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဆွေးနွေးခွင့် ရရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့ ပြည်သူ့ငွေစရင်းကော်မတီတို့က ကော်မတီဝင်တွေက လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး လက်ရှိမှာ အမတ် ၂၀ ဝန်းကျင်ထိရှိပြီလို့ ဦးကျော်ဇေယျ ကပြောပါတယ်။
၂)ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့ကျေးရွာအချို့မှာ နေအိမ်တွေ ပစ္စည်းတွေယူငင်ဖျက်ဆီးခံထားရ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ် ညောင်ကန်နဲ့ စေတီတောင်ကျေးရွာတွေက ရွာသားတွေဟာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အတွက် ကြောက်လန့်ပြီး ရွာကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြစဉ် အိမ်တွေအကုန်လုံးကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ ယူဆောင်သွားပြီး မယူနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ တွေ့ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကညပိုင်းအချိန် မြေပုံမြို့နယ် စေတီတောင်ကျေးရွာမှာ တပ်မတော်နဲ့ အေအေ တို့အကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားတဲ့ အတွက် စေတီတောင်ရွာနဲ့ ညောင်ကန်ရွာသားတွေဟာ ကြောက်လန့် စိုးရိမ်ပြီး ရွာကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ရွာထဲကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခု ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး နေအိမ်တွေ အကုန်လုံး ချိုးဖောက်ခံရကာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ယူဆောင်ခံရသလို မယူဆောင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လည်း ဖျက်ဆီးထားခဲ့တယ်လို့ ရွာကိုပြန်ခဲ့သူ ညောင်ကန်ရွာသားတစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ဒီစွပ်စွဲချက်အပေါ်မှာ တပ်မတော်က တော့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
ညောင်ကန်ရွာဟာ အိမ်ခြေ ၃၆၀ ရှိတဲ့ ကျေးရွာကြီး တစ်ရွာဖြစ်ပြီး နေအိမ်တွေသာမက ဈေးဆိုင်တွေ၊ အပ်ချုပ်ဆိုင်တွေ အကုန်လုံး ချိုးဖျက်မွှေနှောက်ခံရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပါသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အတိအကျကိုတော့ သူ့အနေနဲ့ မသိရှိပေမယ့် ဒီလို ယူဆောင်ခံရတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေကို ရရှိထားတယ်လို့ မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ကျေးရွာအတော်များများဟာ တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်ပွားရင် ခုလို အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ကလည်း ဘူးသီးတောင်မြိုနယ် ကျောက်ပြင်ဆိပ်ရွာမှာ တစ်ရွာလုံး မွေနှောက်ခံရပြီး ဆန်စပါးတွေပါ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။
၃)ရခိုင်ကရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစ္စရေးအစိုးရကမြန်မာကို ရှုံ့ချကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေကို အစုလိုက်သတ်ဖြတ်တာတွေကို ရှုံ့ချ ကြောင်း အစ္စရေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေးနဲ့ အရေးယူအပြစ်ပေးရေးဆိုင်ရာသဘောတူ ညီချက် (Genocide Convention) ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး အာဖရိကတိုက်ရှိ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲဆိုထားတာကို မြန်မာခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မယ် လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးသံအမတ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ ကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး အဲဒီအတွက် ကံကောင်းပါစေလို့ အားပေးစကား တခုကို သူ့တွိစ်တာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပို့စ်ကို နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံ Jerusalem မြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ မစ္စတာ အီတေမာခ် Eitay Mack က အဲဒီတွိစ်တာပို့စ်ဟာ မှားယွင်းတဲ့ပို့စ် မဟုတ်ဘူးလို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက် အခုလို အစ္စရေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့နေ မစ္စတာ အီတေမာခ် က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခံနေရ
၄)မော်လ်တာနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာ ရာထူးကနုတ်ထွက်မယ်လို့ ထုတ်ပြော
မော်လ်တာနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဂျိုးဆက် မူစကတ်ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းမှာ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်တော့မယ်လို့ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။
မော်လ်တာ အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေကြားက အဂတိမှုတွေကို သတင်းစုံစမ်းနေတဲ့ အမျိုးသမီး သတင်းထောက် Daphne Caruana Galizia ဒပ်ဖနီ ခါရုဟွာနာ ဂလက်စီယာ သေဆုံးမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခံနေရချိန်မှာ အခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသား ၂ဦး ကားတိုက်ခံရလို့သေဆုံးပြီးနောက် လမ်းပေါ်ဘေးကင်းရေး တိုးလုပ်ဖို့ လူသောင်းနဲ့ချီဆန္ဒပြ
၅)ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ ကျောင်းသား ၂ဦး ကားတိုက်ခံရလို့သေဆုံးပြီးနောက် လမ်းပေါ်ဘေးကင်းရေး တိုးလုပ်ဖို့ လူသောင်းနဲ့ချီဆန္ဒပြ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတော့ အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားတိုက်ခံရလို့ ကျောင်းသား ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်းနဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ အပါအဝင် လူ ၃ ဦး သေဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရ ပါတယ်။
လူသတ်မှုနဲ့ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုပြီး တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ပါတဲ့ကားကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ရော သူ့လက်ထောက်ရော ဒီယာဉ်တိုက်မှုမှာ အပြစ်မကင်းဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ လမ်းပေါ်ဘေးကင်းရေးတိုးလုပ်ဖို့ လူထောင်သောင်းချီက လမ်းပေါ်တက်ပြီး အစိုးရကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြတာ တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရန်ကုန်လွှတ်တော်အမြန်ခေါ်ယူပေးရေး တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမယ်၊ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစ္စရေးအစိုးရကမြန်မာကို ရှုံ့ချကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြောအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ